Hiiraan: Al-shabaab oo wareero gaadmo ah ku qaaday ciidamada Itoobiya
Xoogag taabacsan Al-shabaab ayaa saaka waaberigii xiligii salaada subax weeraro isugu jira ismiidaamiin iyo mid toos ah ku qaaday saldhig ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka tirsan ku leeyihiin degaanka Halgan ee gobolka Hiiraan.
Weerarkan ayaa ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah oo gaadiid loo adeegsaday, waxaana xigay dagaal toos ah oo xoogaga Al-shabaab ku qaadeen saldhigan, waxaana halkaas ka socda dagaalo culus oo dhexmaraya xoogaga Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya ee saldhigaas ku sugan.
Goob joogayaal degaanka Halgan ku sugan ayaa sheegay iney maqlayaan rasaas culus iyo qaraxyo waaweyn oo halkaas ka dhacaya, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in Al-shabaab ay gudaha u galeen saldhiga AMISOM.
Weerarkan ayaa la mid ah kuwii Al-Shabaab ay horey ugu qaadeen saldhigyada ciidamada AMISOM ee Leego, Janaale iyo Ceel-cadde kuwaasoo lagu dilay boqolaal ka tirsan ciidanka AMISOM cagtana lagu mariyey xeryahaas, waxaana Al-shabaab ay ka qaateen xeryahaas hub aad u fara badan oo kala nooc ah.
illaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkan oo weli socda, waxaana liidata isgaarsiinta degaanka Halgan, wixii warar ah ee ku soo kordha kala soco wararkeena dambe.